Ake sibheke esifanayo, indlela ukuze useshe "google" izithombe, futhi izithombe ezisebusweni kukhompyutha yakho. Lo magazini ufanelwe ukuqashelwa uma kuphela ngoba lokho kukho kufuna isebenza kancane kancane, kodwa bazi ngakho, hhayi bonke abasebenzisi inethiwekhi emhlabeni wonke.
Namuhla, i-Internet ngokuqinile ixazululwe ezimpilweni zethu. Ngesikhathi isidingo kancane, siphendukela kuye usizo. Kusisiza ukuthola ulwazi olufanele, ukuxhumana nabantu, ukuze uthole izindaba zakamuva kakhulu emhlabeni ngisho ukuhlela umsebenzi imishini ephambili kakhulu futhi imishini. Asikwazi ukuxhumana ngaphandle kokushiya indlu, umlisa ohlala kwelinye izwekazi, futhi kuyashesha, elula futhi zibiza kakhulu asipheli. Cishe zonke zokuphila kwethu sihlobene eduze World Wide Web, ngoba namuhla wonke umuntu noma ikhompyutha yakho. Iningi bethu bayawazi amazwi anjengokuthi "Iseva", "website" noma "isiphequluli". Futhi abantu eziningi zalezi zinsuku, igama elithi "surfing" ayisahambisani ne ebhodini futhi kwaheha amagagasi. Lona izwe yomuntu yesimanje. Yena isishintshe kakhulu kule minyaka embalwa amashumi eminyaka, kodwa asizange sibe sibi kakhulu, nje baba ukuhluka kancane.
Ngokuqinisekile umsebenzisi inethiwekhi ngamunye wazi ukuthi okungcono injini namuhla-Google. Kuyinto esisemqoka kunoma yimuphi umuntu yesimanje, futhi ungathola ngempela cishe yonke into. Ezingosini ze-inthanethi - empeleni ngaso sonke isikhathi umsebenzi olula. uhlangabezana nobunzima ngokukhulumisana ikhompyutha can ngokuphelele wonke umuntu. Ukuze ugweme izinkinga ezifana, sekwanele kancane: possess azani ezithile nangekhono ebasebenzisa umkhuba. Esinye salezo into engenakwenzeka abaningi ucinge isithombe noma izithombe ku-intanethi. Indlela ukusesha "google" izithombe, ukwazi akubona bonke abasebenzisi. Labo are isici ingakamiswa yingcweti, sizozama ukusiza.
Thola isithombe "google": Indlela umsebenzi
Ake sithi Umdwebo isithombe umculi ezingaziwa wena, futhi ufuna ukwazi kabani izandla ekudalweni kakhulu. Noma, ingabe unaso i nekhwalithi isithombe futhi ufuna ukuthola endaweni ukunwetshwa kangcono noma ngaphezulu. Noma mhlawumbe ukwazi uzithela isithombe imodeli pretty intombazane futhi alangazelela ukwazi ukuthi ungubani. Noma ingabe lesikhumbuzo langa bokwakha, futhi unesithakazelo indaba yakhe. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini - Google ukusiza.
Izimo zethu zihluke kakhulu muva ngokuthi kwakungenzeka lokhu akatholakalanga ezinjinini, kodwa nokuthuthukiswa kwamathuba Inthanethi ezihamba phambili ngokukhulu ukushesha. Namuhla ungathola hhayi kuphela izithombe ezifanayo inethiwekhi. Ngo "Google" search for izithombe ezifanayo ezimbi zingenza nokuhlukileko. Ziyakwazi kuphela ukuhluka original sesicelo sakho. Izihloko kungenzeka okufanayo, okufanayo kuyoba imibala noma ezinye izici. Ngakho, ake sihlole kabanzi sendlela ukusesha "google" ngokuba izithombe. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona, zazo uzodinga ukwazi.
Sesha ngesithombe: "I-Google Chrome"
Cishe zonke iziphequluli okwamanje ekhona ubunjalo yesimanje Inthanethi ngenkathi, ingakusiza kusesho lwakho. Kodwa ethandwa kakhulu futhi enokwethenjelwa namuhla-Google Chrome. Design Its isivele ihlanganiswe ikhono ukuthola isithombe "google" ulwazi. Kodwa ukuze kube lula, ungasetha isandiso ezengeziwe isiphequluli ekhona, ulilande esizeni esemthethweni. "Sesha i-Google lesi sithombe" ukuze kube lula ukusetshenziswa inkonzo enjalo uzodinga chofoza inkinobho yegundane kwesokudla on imenyu yamashothikhathi bese ukhetha ukwahlukanisa. Ngaphambi uvula ithebhu ukuze useshe, lapho ufaka ulwazi olwengeziwe. Kodwa lokhu akuyona nje kuphela, futhi uma ungakwenzi lolu hlobo ukusesha njalo, kukhona ongakhetha lula kakhulu futhi ngokushesha.
Eqinisweni, ngo-smart nokwazi injini yokusesha isivele esakhelwe "Google" - "ukubheka isithombe." Nalapha futhi, lutho nzima. Kumele uvule ikhasi kuqale-Google bese umuse isevisi "Isithombe." Ungenza kanjalo: http://images.google.ru/. Kulokhu, injini yokusesha ekhasini lokuqala uzobona isithombe ikhamera encane. Yena - nje okudingayo. Ukuchofoza ke, ungakwazi faka ikheli lewebhu yesithombe izithombe atholakalayo. Ukuze wenze lokhu, ngokucindezela kwesokudla ikhamera, khetha "Cacisa isixhumanisi" bese ufaka i-URL yesithombe. Okokuqala ungase uprakthize phezu izithombe "Google". Uzosheshe bafunde indlela yokukwenza ngokushesha futhi ngendlela efanele.
Sisebenzisa ulwazi kwikhompyutha yakho
Indlela ukusesha "google" ngokuba izithombe, uma kubuso bekhompuyutha kwikhompyutha yakho? kungenzeka okunjalo, futhi. Ungakwazi ulayishe isithombe ukucinga ifayela ku-PC yakho. Izenzo ziyefana esimweni sokuqala. Chofoza ikhamera, khetha umugqa "Layisha isithombe" bese usetha indlela eya ifayela. By the way, ku-Chrome wena umane hudula isithombe nge igundane ebhokisini lokusesha. Kukhona ngisho kulula: nje udonse igundane in the image search engine umugqa - futhi uqedile. Vula isithombe bese uchofoze ngenkathi ebambe phansi inkinobho yegundane. Hudula yekheli injini. Uyekele inkinobho uma isithombe zayiswa umugqa. Linda emakhasini Inthanethi. Kumele kuqashelwe ukuthi le ndlela ukucinga isithombe inethiwekhi kudingeka ibe usayizi hhayi amabhayithi engaphansi kwengama-20, noma ukuhlangana nobunzima.
Emva ulanda image, uzobona wonke izinketho etholakala inethiwekhi. iyona ngqa kahle ukuthi ufuna, ngefomethi esikhulu ezihlukahlukene izithonjana ezifanayo. Zonke izithombe nezithombe kungaba ehluke ngokuphelele, kuba ezincanyana kanye izithombe ezifanayo ngesitayela nombala scheme. Ukuze uthole umphumela waba ngokunembe ngangokunokwenzeka bese uphendula ikakhulu nezidingo zakho, faka string search ulwazi ukuthi ungumnikazi. Ngokwesibonelo: "ikhamera vintage," "UPetru mina» noma ngaphezulu. Ngokusho imiphumela, awukwazi nje sibheke izithombe "Google" efanayo noma kangcono izinga izithombe, kodwa futhi uthole izixhumanisi Amakhasi ngolwazi unesithakazelo ukufunda. Singagcina ngokubu- hamba kuye.
Manje uyazi ukuthi ukuze ubuke kokuthi "google" izithombe ulwazi oludingayo. Ukuhluka zalolu hlobo locwaningo empeleni impela eningi futhi zithandwa kakhulu. I kungenzeka "Google" useshe usebenzisa isithombe awukwazi nje ukukunika ulwazi lwemvelo lobuchwepheshe iyiphi idivayisi, kodwa futhi ukuthola umuntu oxoxa abawubonanga, isibonelo, eminyakeni inyuvesi. Uma unenhlanhla, isithombe osithandayo kungenzeka egcinwe nomngani wakho mayelana nezingosi zokuxhumana iphothifoliyo nomphakathi. Resources ezifana "Ofunda nabo" futhi "VKontakte" isibonelo, Ziningi izithombe kwabantu abanjabulo yabo igama lokuqala noma isibongo singazi ukukhumbula ngenxa kwesikhathi. Kodwa into - ke isifiso, futhi zonke uthola. "I-Google" uzothola konke futhi wonke umuntu.
Kufanele ukuthi ukuthola lolu hlobo ukwaziswa okukuyi-Internet, zikhona izinkonzo ehlukile. Omunye walena uwukuba TinEye.com. Le sayithi ubuye ngempela bakwazi ukukusiza. Sebenza naye, futhi unga, njengoba ne injini yokusesha ye-Google. Faka ikheli le-noma yini isithombe ngokwaso - bese uthole imiphumela. Uma i-Google, nganoma isiphi isizathu, uye wanikeza ukwaziswa akuphelele, ukusebenzisa lo mthombo, kungenzeka, kuyokusiza. Uma isithombe wena oyifunayo - hhayi isithombe ethandwa kakhulu inethiwekhi, kungcono ukusebenzisa izinketho eziningana for ukusesha.
Lowo ohlola njalo uthola, into esemqoka - ukuze banesifiso impela kancane isikhathi mahhala futhi indlela yokukwenza kwesokudla, uyazi. It uhlala kuphela ufisa usesho yimpumelelo futhi ephumelelayo. Ngikufisela inhlahla!
Indlela ukushintsha ikheli lasesizindeni